एम्बुलेन्समा बसेकी ग’र्भवती महिलाको पेटको पटुका फु’काएर हेर्दा… – Sandesh Munch
May 18, 2020 444
काठमाडौं । लकडाउन छ’ल्न मानिसले अनेक उ’पाय अ’पनाउने गरेका छन् । जुन उपाय पढ्दा रो’चक लाग्छ । सरकारले को’रोना फै’लन नदिन लकडाउनको नीति अ’वलम्बन गरेको छ । लकडाउन पा’लना गराउन प्रहरीहरु खाइ नखाई सडकमा ड्यु’टीमा बसेका छन् ।तर सर्वसाधारणले त्यसको बा’ध्यता भने बुझ्न नसक्दा दिनहुँ कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या बढेको छ । खोटाङको दि’प्रुङ चु’ईचुम्मा गाउँपालिकाले सु’त्केरी बोकेको एम्बुलेन्समा बसेर घर आएका पाँच जनालाई नि’यन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखेको छ ।
Prevखुशीको खबर ! कोरोनाबाट आमा गुमाएका शिशुसहित परिवारका चार जना सदस्यको कोरोना नेगेटिभ
NextBreking News.. आज फेरि एकै पटक ५३ जना कोरोना संक्रमित जम्मा ३५७ पुग्यो
कति वर्षको मानिसले कति घन्टा सुत्नु पर्छ ? जानी राखौ स्वास्थ्य भन्दा ठुलो केही छैन